ဒူဘိုင်း7ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်🏩 Burj Al Arab Jumeirah - ယူအေအီးအတွက်လမ်းညွှန်
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဖေဖေါ်ဝါရီလ 18, 2019
အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များနှင့်7Star Hotel အကြောင်းလမ်းညွှန် ဒူဘိုင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီလက္ခဏာနေရာနှင့်သင်ဆုံးဖြတ်ကူညီရန်ကြိုးစား။ သငျသညျဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏အကောင်းဆုံးဟိုတယ်သွားရောက်ချင်ပါတယ်ဘာပဲ။ သင်ပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အလမ်းပေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဟိုတယ်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်နည်းနည်းလှုံ့ဆော်။
ဒူဘိုင်း7စတားဟိုတယ်၌: အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူအပြီးအစီးလမ်းညွှန်။ Neowise.org အားဖြင့်ထွင်းထု - ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနိုင်ငံခြားသားများနှင့်ဒေသခံအသုံးပြုသူများအတွက်ကိုလမ်းပြ။
The World's Exclusive Hotel အကြောင်းသိသင့်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ် ဒူဘိုင်းမြို့။ Jumeirah ကနေတွစ်တာကိုအမြဲတမ်းကြည့်နိုင်ပြီးဘာကိုကြည့်လို့ရမလဲ ဒူဘိုင်းတွင်!.
ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် ဒီအံ့သြဖွယ်ရာအရပျနဲ့ပတျသကျတဲ့ဒဏ္ဍာရီနှင့်မရေမတွက်ပုံပြင်များ။ အဆိုပါ Burj Al Arab ဒူဘိုင်းရဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောတစ်ခုအထင်ကရရွက်-shaped ဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤ နေရာ နှလုံးသား၌တည်ရှိ၏ အာရေဗျပင်လယ်ကွေ့စီးပွားရေးစင်တာ။
ဤသည်ကြီးမားသောအရွယ်အစားဟိုတယ်ပဉ္စမအမြင့်ဆုံးကမ်ဘာပျေါတှငျဟိုတယ်နှင့်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသ Jumeirah ထိပ်တန်းဟိုတယ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်, ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဇိမ်ခံ ဟိုတယ်ကွင်းဆက်, Jumeirah ထိပ်တန်းဧညျ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်င်း၏အမှတ်အသားအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ, ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အ, ဒူဘိုင်းကဟိုတယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သို့သော်7Stars rating ရှိခြင်းကြောင်းတစ်ဦးတည်းသာရှိသေး၏။ လျင်မြန်စွာ VIP ဧည့်သည်အဓိကအားဖြင့်စူပါဇိမ်ခံနှင့်ဖြစ်လာ။ ဒါဟာဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဇိမ်ခံနေရာအပေါ်မှာကျိန်းသေပါပဲ။
Burj Al Arab ရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် VIP အရ ဟိုတယ်မှာကုသမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ Burj Al Arab7ကြယ်ပွအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ပိုပြီးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ bit နဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်တစ်နည်းနည်းရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် ...
Burj Al Arab Jumeirah, ဒူဘိုင်း - ကျနော်တို့ဒူဘိုင်း7ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်ကိုချစ်
Burj Al Arab Jumeirah, ဒူဘိုင်း
သူတို့၏ စီအီးအို ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင် 30 နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်သည် ထိုအသင်အံ့သြဖွယ် hotelier ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကြုံတွေ့အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အမှန်တကယ် extensional ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံကိုကျော်ထောက်ပံ့ရန်အလွန်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားရှိပါသည် သူတို့ရဲ့ဧည့်သည်များအတွက်။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောသင်အိပ်မက်မက်လိမ့်မယ်ဘာမှရှိခြင်းလိမ့်မည်3နေ့ရက်ကာလ၌အကြောင်းကို !. တွင် အဖြစ်မှန်, သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးရုံ Burj Al Arab မန်နေဂျာတောင်းဆိုရန်နှင့်သေချာထိုသို့ပြုမိပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည် !.
No.2 Duba အတွက် Excellence လေးအတွက်အသင့်တော်အတွေ့အကြုံi
တဦးတည်းဟိုတယ်အတွက် 11 စာဆိုင်များရှိပါသည်!
သငျသညျရှာဖွေနေနှင့် gastronomic နေကြတယ် ရှငျဘုရငျကိုစတိုင်ခရီး?။ ဤသည်ဒူဘိုင်းစားသောက်ဆိုင်ထိုဝန်ဆောင်မှုများပေးပါသည် !. မသာသငျသညျလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစားအစာများစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သင်ဆုရစားသောက်ဆိုင်မှာကြိုက်နှစ်သက်မဆိုအစားအစာစာပေအလို့ငှာနိုင် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ Burj Al Arab Jumeirah ၏။ ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့မဆိုမုန့်ညက်ကိုအာမခံလွင်လတ်ဆတ်နှင့်အတူသင်တို့လက်သို့အပ်ရလိမ့်မည်ကဆိုလို !. ဒါကပဲ wow ဖြစ်ပါတယ် !.
အဆိုပါဟိုတယ်ကိုရိုးရာ Arabic အဘိဓါန်ထဲကနေ, အတော်လေးအံ့သြဖွယ်အစားအစာများတာဝန်ထမ်းဆောင်, ပါကစ္စတန် နှင့် အင်ဒီးယန်း အာရှဝေး-အရှေ့နှင့်ခေတ်သစ်ဥရောပဟင်းလျာများမှအစားအစာကိုတက်။
သငျသညျဒူဘိုင်းလေဆိပ်များတွင်ဆင်းသက်ကတည်းကအဆိုပါယာဉ်မောင်းဟိုတယ်ကိုရန်သင့်အားယူပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါသင်သည်စားသောက်ဆိုင်သို့သွားရောက်များနှင့်အကောင်းဆုံးကမ္ဘာတွင်လူလုပ်အရသာတစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပေါင်းစပ်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, သငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အက၎င်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်တို့အဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ဖန်တီးမှုအချက်အပြုတ်လက်ရာစေရန်တောင်းဆိုရန်နိုင်ကြသည်။ ဒီတော့ Burj Al Arab တကျိပ်တပါးသောလက်မှတ်စားသောက်ဆိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်ကိုဖြတ်ပြီး။
ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုဒီဟိုတယ်ကသူတို့ရှိခြင်းရဲ့ကပြောပါတယ် ဇိမ်ခံ၏ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်ထူး။ ရိုးရိုးသားသား, သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးကိုယ့်ပိုက်ဆံအကောင်းတစ်ဦးငွေပမာဏကိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးဇိမ်ခံဟိုတယ်, Burj Al Arab မှာဘဝကိုစွန့်စားမှုဇာတ်လမ်းကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Jumeirah မီးဖိုချောင်စားဖိုမှူး Away သင့်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းခြေလှမ်းများမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်အမှတ်ရစရာထမင်းစားခန်းအတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးပါ။ ဘောဇဉ်ကိုကျော်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ထိုနည်းနည်းကြာကြာနေဖို့။ ရိုးရှင်းစွာအက၎င်းတို့၏တည်နေရာကိုဖွင့်လို့ပဲ။
No.3 ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးနှင့် Spa
ယူအက်စ်အေအတွက်ဇိမ်ခံကမ္ဘာ စော်ဘွား။ ဤသည်ကျန်းမာရေးနှင့် spa ကအာရေဗျပင်လယ်ကွေ့အထက် 150 မီတာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Burj Al Arab Spa အမ်းမရိတ်အတွက်အဆုံးစွန်ဇိမ်ခံဖြစ်ပါသည်။ , luxuriate အနားယူနှင့် rejuvenation အတွေ့အကြုံကိုရဖို့ရှာဖွေနေသည်ဤအံ့သြဖွယ် destination သို့လာရောက်လည်ပတ်ကြသူလူများအများစုမှာ။
သို့သော် clients များပေးပို့အတွေ့အကြုံများအသီးအသီးဂရုတစိုက်ထွင်းထုထားပြီးနှင့်ကြီးကြပ်ရေးမှူး, ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကကို double-check လုပ်ထား။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဤဝန်ဆောင်မှုများသီးသန့်ကြွယ်ဝသော Customer များအတွက်တီထွင်နေကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာ့အများဆုံးဇိမ်ခံထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးနေစဉ် ဒူဘိုင်းဇိမ်ခံစျေးကွက်၏ထိပ်တန်းစင်ပေါ်မှ။ တဖန်သင်တို့စိတ်ပြည်နယ်အပန်းဖြေအတွက်ဒူဘိုင်းစွန့်ခွာနိုင်ကြသည်။
No.4 Burj Al Arab စီးပွားရေးအစည်းအဝေးများနှင့် Conferences က
ခရီးသွားများအတွက်နှင့် ဒူဘိုင်းအတွက်အစာစားခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းသာဧည့်သည်များ။ ထိုကဲ့သို့သောပိုပြီးကမ်းလှမ်းဒူဘိုင်း၌ဤ 7-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်အဖြစ်သောနေရာများ:
နေရာများ - ဒါကဇိမ်ခံကားတစ် Jumeirah ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အဆိုပြုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကပင်တ Burj Al Arab Jumeirah မှာဖြစ်ရပ်များ၏တူညီသောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ဘို့တောင်မြှူလျက်ရှိ၏။ အဆိုပါနေရာအသီးအသီး clients များလိုအပ်ချက်များအတွက်ပြင်ဆင်ထား၏။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနေ့လည်စာ ကျောထောက်နောက်ခံဝန်ဆောင်မှု စစ်မှန်အာရေဗျဧညျ့။ အများအားဖြင့်ဟောလိဝုဒ်ကြယ်များနှင့်အသုံးပြုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်များ။ သို့သော်ဆုရသောအစားအစာနှင့်ခေတ်မီဆန်းပြားသောသာယာအဆင်ပြေမှုများသည်နေ့လည်စာတိုင်းကိုတန်ဖိုးကြီးသောနေရာ၌အရေးကြီးသောသဘောတူညီမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်မှတ်မိစေရန်သို့မဟုတ်ပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
မင်္ဂလာဆောင် ဒူဘိုင်းအတွက်, ဒီတစ်ဦးမေတ္တာနှင့်အလှအပအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ-managed နှင့်အတူ အာရေဗျပင်လယ်ကွေ့၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များ။ သင့်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေ့ကသင့်မိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှဖြစ်လိမ့်မည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေး - ဤဒူဘိုင်း7စတားဟိုတယ်၌ရှိပါတယ် ပူဇော်ဖို့အများကြီး။
အကြီးစား VIP loges နှင့်အံ့သြဖွယ်နေရာများပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းညီလာခံများအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည်။ အသစ်သောညီလာခံနှင့်စီးပွားရေးစာတမ်းဖတ်ပွဲအဘို့ဤဟိုတယ်အားသာချက်ကို အသုံးပြု. ထိုမှတပါး, ထိပ်တန်းကော်ပိုရိတ်မန်နေဂျာ။
ဖြစ်ရပ်များ - သူတို့ကဒူဘိုင်း7စတားဟိုတယ်၌အတွက်အမာခံန်ဆောင်မှုများဖြစ်ကြသည်။ တောငျးဆိုခကျြအပျေါကိုဖန်ဆင်းအံ့သြဖွယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်နေရာများ။ ပုဂ္ဂလိကများစွာသော corporate အစည်းအဝေးများ့စံပြထက်အများကြီးပိုပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအတွက်7စတားဟိုတယ်၌သွားရောက်ကြည့်ရှု
No.5 Burj Al Arab အပိုဆုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ကောင်းပြီ, ဒီသူတို့ပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ကြောင်းအခြားဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အထူးကဒ်ပေါ်မှာအပြာရောင်, Silver, သို့မဟုတ်ရွှေမှတ်စုဆောင်းစတင်ပါ။ ကြောင်း happend အောင် သငျသညျလျှောက်ထားရပါမည် တစ်ဦး Jumeirah Sirius အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရန်။
အဆိုပါစနစ်အားအတော်လေးအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ရိုးရှင်းစွာအသငျသညျနှစျခု Jumeirah Sirius အမှတ်စုဆောင်း start အခါ။ ထိုအခါယေဘုယျအားဖြင့်သင်တစ်ဦးဟိုတယ်အတွက်သုံးဖြုန်းတိုင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1, စားသောက်ဆိုင်, Spa မ်ားအဘို့, စကားပြော။ သငျသညျအဖြစ် reworded ပါလိမ့်မည် ဒူဘိုင်းအတွက်သီးသန့်အခွင့်ထူးမှပုဂ္ဂလိက access ကို ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအပန်းဖြေစခန်းအချို့ကိုမှာ7စတားဟိုတယ်၌!
အတူအကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်တစ်ဦးကြည့်ဖူး Sirius အသင်းဝင်။ သငျသညျရှိရသည့်အခါသင်တဦးတည်းရလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Burj Al Arab သွားရောက်ကြည့်ရှု
No.6 အဆိုပါ Burj Al Arab ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဒီကုမ္ပဏီလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ အဆိုပါ Jumeirah အုပ်စုတစ်စုဂုဏ်သတ္တိများတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်သည်။ Marina ဂိတ် Living ဥပမာအားဖြင့်, ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး။ သူတို့ကတစ်ဦး Jumeirah မပ်စ်ကတ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အဘို့ဘားအဖြစ်အိုမန် Jumeirah Atakoy ဟိုတယ် & Residences ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းအသစ်သောဟိုတယ်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတည်ဆောက်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီများအတွက်အစီအစဉ်ကိုတင်ပြ။ ထိုအခါ Jabal အိုမာ Jumeirah မက္ကာ။ နှင့်သင်တန်း၏, ဆော်ဒီအာရေဗျ၏နိုငျငံတျော အနည်းငယ်စီမံကိန်းများကိုတစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ mode မှာလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Jumeirah ကမ္ဘာ့အများဆုံးဂုဏ်သိက္ခာသည်နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်အချို့ကိုအတူတက်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်အတွက်ကုမ္ပဏီအများစုကဒီဒူဘိုင်း7ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်မှုရှိသည်ဖို့လိုပါတယ်။
ဤသည်ဟိုတယ်, ယေဘုယျအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းအမျိုးမျိုးတို့နှင့်လည်းသူတို့ရဲ့ဧည့်သည်များများကိုရှာဖွေနေစကားပြောခြင်း။ ဒါကြောင့်, jတိုင်းတစ်ဦးချင်းစီဧည့်အောင် ust happy နှင့်၎င်းတို့၏နေထိုင်စေခြင်းသို့မဟုတ်အမှတ်ရစရာတဦးတည်းသွားရောက်ကြည့်ရှု။
ဥပမာလေကြောင်းလိုင်း Flyer အစီအစဉ်များသည်ဟိုတယ်နေ့လည်စာအတွက်မန်နေဂျာများနှင့်ကြီးကြပ်ရေးမှူးအများအပြားက high-class ကိုဆို။ ဒီအတိုင်းနေထိုင်ဘို့မိုင်ဝင်ငွေရိုးရှင်းစွာဒီဟိုတယ်ဧည့်သည်များအားဖွင့်အဖြစ်သီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုကနေအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်။
အများကြီးရှိပါတယ် သင်တစ်ဦးလျှော့စျေးရှိနိုင်သည်ကို Airlanes ကုမ္ပဏီများမှ။ ဥပမာအားစော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, Etihad လေကြောင်းလိုင်း, ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းအများအပြားကပိုသည်။
Jumeirah ဟိုတယ်သည်အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းအကျိုးရှိရှိဆက်နွယ်မှုရှိသည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။ သူတို့ကဘဏ္financialာရေးနှင့်အပါအဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစုစုကို ယူအေအီးအတွက်ဇိမ်ခံကားအမှတ်တံဆိပ်။
No.87စတားဟိုတယ်၌အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဖတ်သူတွေကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်ဘယ်မှာအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရရန်ကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေနေကြသည်။ သင်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း7ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်။ ဥပမာ - ဒူဘိုင်းရှိ Jumeirah စားသောက်ဆိုင်အုပ်စုသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်ရုံးခန်းကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ နေရာလွတ်တွေအများကြီးရှိတယ် ဒူဘိုင်းနှင့်ပင်အဘူဒါဘီအတွက်ဧညျ့ကဏ္ဍ။
ကောင်းပြီ, ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဟိုတယ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ အဲဒီစီမံခန့်ခွဲရန်ခက်ခဲသဘောတူညီချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ပြည်တော်ပြန်တွေအများကြီးရှိသေး၏။ လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ထံမှ။ ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ကြလိမ့်မည်။
သို့သျောလညျးသငျသညျအရှုံးမပေးဘယ်တော့မှရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ကံကြိုးစားပါနှင့်သင့် updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင် drop ။ သင်သိဘယ်တော့မှကြောင့်, လာသောအခါ HR မန်နေဂျာများသင်အင်တာဗျူးနဲ့ကံကောင်းခေါ်ဆိုခချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ !.
သင်၏ CV နှင့်အတူဤနေရာတွင် Apply
ဒူဘိုင်း7စတားဟိုတယ်၌ဂျော့ဘ်
ကောက်ချက် ဒူဘိုင်း7စတားဟိုတယ်များအတွက်
Arabic အဘိဓါန်ယဉ်ကျေးမှုပဲအံ့သြဖွယ်များနှင့်ဧည့်ဝတ်ပြုပြည့်ဝ၏။ ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ခရီးသွားဧည့်များအတွက် အတော်လေးကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဤကုမ္ပဏီကိုသာ 5-ကြယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှိပြီးသူတို့ရဲ့ဧည့်သည်တစ်ဦးအများစုကျိန်းသေဒီအံ့သြဖွယ်ဟိုတယ်သွားရောက်ပြန်ဖွစျလိမျ့မညျနေကြသည်။
ဒီဟိုတယ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းနှင့်ကြောင်းစုစုပေါင်းမည်မျှကြီးဘယ်လိုတီဗီရဲ့အစီအစဉ်များကိုအများကြီးလည်းရှိပါတယ်။ အဖြစ်ဝေးကျနော်တို့ကိုစဉ်းစားအဖြစ် ဒူဘိုင်းတွင်ဆက်နေရန်အကောင်းဆုံးနေရာအဖြစ်ဤအရပ်ဌာန သင်သာသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းများတတ်နိုင်လျှင်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကူညီပေးခဲ့မျှော်လင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်းမြို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုလဲရန်သင့်အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, သင်ပြန်လာပြီးနောက်တဖန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်တယ်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒီတော့ဒါကိုစိတ်ထဲထားပြီး၊ သင်ယခုရနိုင်သည် လမ်းပြသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်။